ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ကိုဝင်းကိုလှိုင်ရေးသမျှအစုံပလုံ
(ဥပဒေအရပြောမယ် တရားစွဲမယ်ဆိုလျှင် ပြဿနာရဲ့အနီးဆုံးမှာ ရှိခဲ့တဲ့သူတွေကို အရင်ဖမ်းပြီးစစ်ဆေးရတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မသိဘူးထင်တယ်) ဂျပန်စစ်ကြောရေးကျောင်းဆင်း...၀င်းကို
ဆင်းရဲတဲ့ သူငယ်ချင်း၂ယောက် ကျောက်သွားတူးကြတယ် ၂၅နှစ် ကြာ ၊ပြန်လါတော့ တစ်ယောက်ထဲ မပြန်လါတဲ့ မိသားစုကမေးတော့ တောကောင်ကိုက်သွားလို့ တောထဲမှာ သေသွားတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့ ပြန်လါတဲ့သူက တိုက်နဲ့ကားနဲ့လေ။ အဲဒီတောကောင်ကို တရားခံလိုက်ရှာနေတာလါး ရီစရာကြီးကွာ....
မြောက်ပိုင်းပြဿနာမှာ အမှန်ကမြောင်ပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ စမ်းချောင်းဘိုဘို၊ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ NB ရဲလင်း သူတို့မှာသာ တာဝန် အရှိဆုံးလေ..ဒါကို သူတို့မှန်ကန်ကြောင်းပြသဖို့ မိမိသမိုင်းအဖတ်ဆယ်ဖို့ သူများကိုလွဲချနေကြတာလို့ဘဲထင်မှက်တယ်....ဘာဘဲပြောပြော မေသင်္ကြန်ဟိန်းလေးထည့် ထားပြီး ထောက်လှန်းရေးက စုံစမ်းစရာမလိုဘဲ ABSDF အားလုံးခွေးဖြစ်မဲ့ဇာက်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။..၀င်းကို
— with UZa Wana and 41 others.
Swe Swe Win Han နာတော်တော် စိတ်ရှုတ်လာပြီနော်
January5at 10:19pm · Like
Do Gyi NBကိုဝင်းကိုရေအကိုလဲABရဲဘော်ဟောင်းကျွန်တော်တို့လဲABရဲဘော်ဟောင်းတယောက်ပါABကိုအကိုတို့တန်ဖိုးထားသလိုကျွန်တော်တို့လဲတန်ဖိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ABမပပျက်စီးအောင်လုပ်သွားတဲ့သူတွေကိုတော့ABကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ရဲဘော်များကစုပေါင်းဖေါ်ထုပ်ရမှာပါABရဲဘော်ဟောင်းတွေအားလုံးဟာအမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကြပါတယ်
January5at 10:23pm via mobile · Like · 5
Skyheart Winko ဒီလိုဘဲဖြစ်ရမယ် မြောက်ပိုင်းမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် တောင်ပိုင်းမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် AB သမိုင်းသန့်ရှင်းဖို့ ၀ိုင်းလုပ်ရမှာပါ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန် AB ကို ငါတို့ကကောင်းပါတယ် သူတို့ကမကောင်းဘူးဆိုတော့ ရှင်းမရဘဲ ဘေးကြပ်နံကြပ် ဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် ဘာတွေကထူးလါလို့လဲ ဖျက်ဆီးသလိုလုပ်နေတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေလို့ စိက်ဆိုးနေတာ။မှားလါး..မှားရင်ပြောပါ....
January5at 10:55pm · Edited · Like · 4
အင်ယု အင်ယု အင်းးး တန်ဖိုးထားလို. လုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုက ရှိစုမဲ့စု လက်ကျန် တန်ဖိုးကို မြောင်းထဲရောက်အောင် တွန်းပို.နေသလိုမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ.လို.တော့ ကျနော် အေဘီရဲဘော်ဟောင်း မင်းသမီး ( ၂၀၁ ) ဆသရ အနေဖြင့် ဆုတောင်းပါတယ် ဗျာ။။ ( သတိမမူ ဂူမမြင် ) တဲ့
January5at 10:29pm · Like · 2
Do Gyi NB မပ ရဲ့သမိုင်းအမှန်ပေါ်ဖို့ပါမြောင်းထဲကျစရာမရှိပါဘူး
January5at 11:18pm · Like · 2
Aye Aye Soe Win ((မြောက်ပိုင်းပြဿနာမှာ အမှန်ကမြောင်ပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ စမ်းချောင်းဘိုဘို၊ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ NB ရဲလင်း သူတို့မှာသာ တာဝန် အရှိဆုံးလေ..ဒါကို သူတို့မှန်ကန်ကြောင်းပြသဖို့ မိမိသမိုင်းအဖတ်ဆယ်ဖို့ သူများကိုလွဲချနေကြတာလို့ဘဲထင်မှက်တယ်....ဘာဘဲပြောပြော မေသင်္ကြန်ဟိန်းလေးထည့် ထားပြီး ထောက်လှန်းရေးက စုံစမ်းစရာမလိုဘဲ ABSDF အားလုံးခွေးဖြစ်မဲ့ဇာက်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။))..၀င်းကို
January5at 11:26pm · Like · 1
Do Gyi NB မတရားလုပ်ခဲ့သူတွေနဲ့ ခံရတဲ့သူတွေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ် သူတို့တွေရှင်းမှသမိုင်မှန်ပေါ်မှာအခုခံရတဲ့သူတွေကရှင်းပြနေတာ လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဘာလို့ထွက်ပြီးမရှင်းပြရဲတာလဲ ဒါကိုကြည့်ရင်အဖြေကရှင်းနေပါပြီ
January5at 11:49pm · Like · 1
Aye Aye Soe Win နိုင်အောင် က အစိုး ရနှစ်သက်တဲ. သူဖြစ်နေလို.ပါ။ ဒိတော. အေဘီ က ကြားက သိက္ခာ ၀င်ကျပေးရပါတယ်။
January5at 11:52pm · Like · 2
January6at 12:21am · Like · 2
Hmone Shwe Yi ခုဟာကဂျာအေးသူ.အမေရိုက်ဖြစ်နေတာ-သေဆုံးသွားသူတွေကိုတော.အားနာပါတယ်-သတ်သူတွေကလဲသသျှီသေချာလို.သတ်တယ်တဲ.-NB ကမနန်းအောင်ထွေးကြည်တို.ကလဲသလျှီမပါဘူးပြောတယ်-အဲဒီတော.ဒီပြသနာကအဲဒီအချိန်ကထောက်လှမ်းရေးတွေကိုယ်တိုင်သူတို.သင်ပါလားမပါလားတရားဝင်ပြောမှပြီးတော.မယ်-မမေသကြှန်ဟိန်းအနေနဲ.တဖက်ထဲမေးနေရေးနေမဲ.အစားနီးစပ်တဲ.ရန်ကုန်ကဗိုလ်ခင်ညွန်.ကိုကောအင်တာဗျုးပါ.လား-အားလုံးပါဝင်မဖြေရှင်းသမျှနောက်အနှစ်၂၀တောင်အမှန်ဆိုတာမပေါပါဘူး
January6at 3:05am · Like · 6
Thet Kl Lwin ငုံးပုရေ နင်ပြောလိုဘဲ မေသင်္ကြန်ဟိန်းကို တဖက်ကတာဝန်ရှိသူ(စစ်အစိုးရတွင်းကလူတွေ) အားလုံးကိုမေးပေးဖို့ အကြံပေးလိုက်တိုင်း မေသင်္ကြန်ဟိန်းက အထာလေးနဲ့ မသိသလိုဆောင်နေတတ်တယ်။ သူက ဖွစာဘဲ ရေးတတ်တာဟ မှန်စာမရေးရဲဘူး.......
January6at 4:12am · Like · 4
Hmone Shwe Yiုဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတော.သာအမှန်တရာပေါပေါာက်ချင်တယ်လို.ပြောတယ်-ဒါပေမဲ.အစိုးရနဲ.ငြိနိုင်တဲ.ဟာဆိုဘာမှရေးရဲပုံမပေါဘူး-ပြည်ထဲမှာရေးစရာသတင်းတွေမှအများကြီးသူဘာလို.မရေးလဲနော်-အော်အကြောက်တရားခုထိဖိဆီးဆဲထင်တယ်-သနားပါဘိ-
January6at 4:30am · Edited · Like · 2
Thet Kl Lwin တကယ်ပြောတာပါ မေသင်္ကြန်ဟိန်းက နင်တို့ ငါတို့ ညီမအရွယ်ပါ သူေ၇းသားပြောဆိုနေတာတွေက ကောင်းရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်သတ်ဆန်တဲ့ ပုံစံ၊ဂိုက်သွင်းပြီး ငါတို့ အားလုံးဌာနေကို တဖြေးဖြေးထိလာတယ်လေ။ ဒါတွေဟာ သူစိတ်နဲ့ သူလား ဒါမှမဟုတ် တစုံတရာကြောင့်လားလို့ တေွးကြည့်တယ်ဟ။ တစုံတရာကြောင့်သာဖြစ်နေရင် သူဟာ............. မတွေးတော့ဘူးဟာ
January6at 4:37am · Like · 2
Aye Aye Soe Win မေသင်ကြန်ဟိန်က စာနယ်ဇင်း ကျင်.၀တ်မပါပဲ ဒီ ဆီးရီး ကို လေလံ ဆွဲလိုက်တာပါ။ သူက တော်လှန်သော အင်အားစုတွေ ဟာ အလကားပါပဲဆိုတဲ.၊ ဟိုဘက်အကြိုက် လုပ်ပေးနေတာပါ။
January6at 4:37am · Like · 3
Aung Myint Han ဟုတ်တယ် ဦးခင်ညွန်ကို သွားဗျူးသင့်တယ်
January6at 4:41am · Like · 2
Do Gyi NB မပဖြစ်စဉ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ရော်နယ်အောင်နိုင် ဒေါက်တာကြီးနိုင်အောင်တို့မသေသေးပါရှင်းဖို့ဘာလို့ဝန်လေးနေကြတာလဲရဲဘော်ဟောင်းတွေရောတာဝန်ရှိသူတွေတာဝန်ခံသူတွေAbညီညွတ်ရေးအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအတတွက်ရှင်းလင်းချက်တောင်းခံသင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမတရားခံစားခဲ့ရတဲ့သူပါရောင်းရင်းတို့ကျွန်တော်တို့လိုမတရားခံရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိူရင်ဆိုင်ခံစားရမလဲကိုယ်ချင်းစာကြပါ
January6at 4:57am · Like
Do Gyi NBဒေါက်တာကြီးလဲပြည်တွင်းရောက်နေပါတယ်မပအဖြစ်အပျက်တွေကိုABအတွက်ရောင်းရင်းတို့နဲ့ရင်းနှီးပါကရှင်းလင်းပွဲလေးလုပ်ပေးဖို့တောင်ဆိုကြပါ
January6at 5:05am · Like · 1
Do Gyi NB ABကိုတကယ်ချစ်ကြရဲ့လား
January6at 5:15am · Like · 1
Do Gyi NB တာဝန်ရှိသူတွေ တာဝန်ခံခဲ့သူတွေကို
January6at 5:23am · Like
Do Gyi NB ဘာစိတ်ဓါတ်လဲ ဘာစိတ်ဓါတ်လဲ
January6at 5:28am · Like
Do Gyi NB ဘာလုပ်နေကြလဲABကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆို
တာဝန်ရှိသူတွေဆီကရှင်း မပ ရှင်းတမ်းတွေတောင်းဆိုကြတော့လေ
January6at 5:40am · Like
Do Gyi NBABအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လိုင်းပေါ်မှာမရှိကြတာလဲ
January6at 5:42am · Like
Aye Aye Soe Win သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲ လုပ်နေတဲ.သူတွေက လည်း အစိုး ရ ကို စိမ်ခေါ် မေးခွန်းထုတ်သင်.တယ်။ သတင်းရေးစားနေသူတွေက လည်း အစိုးရ ကို စိမ်ခေါ်မေးခွန်းထုတ်သင်.တယ်။ ဘာကြောင်.- ဒီ ကိစ္စ ကို နည်းလမ်းကျကျ အရေး ယူခွင် မပေးပဲ။ တဖက်မှာ--ဘာကြောင်.- ဒေါက်တာ နိုင်အောင် နဲ. လက်ဝါး ရိုက် စီးဝါူကိုက် ဒီးလ်တွေ လုပ်ထားရပါသလဲ လို. --ပြတ်ပြတ်သားသား မ မေး ကြသေးတာလဲ။ ဒီပဲ ရင်း ကိစ္စ ပေါ် မှာ ကြောက် ကြလို. လား။ အစိုး ရဖက်က သတင်းသမားတွေက တော. အေဘီ ကို အပုတ်ချကောင်း ရုံသာ သတင်း တွေရေးစားနေတာပါ။
January6at 5:45am · Like · 2
Do Gyi NB သူတို့မအေးအေးစိုးဝင်းလောက်အတွေ့အကြုံမရှိလို့နေမှာ
January6at 5:53am · Like · 1
Do Gyi NB အမရေပွဲဖြစ်လားမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်ကဆင်းပြီ
January6at 6:10am · Like
Aye Aye Soe Win အခု ပွဲ လုပ်နေတဲ. ဟာတွေ က --ကို မပြတ်မသားနဲ.ပါ။ သူတို. မှာ ကိုယ်.တံဆိပ်နဲ. ကိုယ်။ နိုင်အောင်ကို အောင်မင်း တို. ကာ ဗာ လုပ်ပေးတာတော. ရှင်းပါတယ်။ အကျင်. ခြင်းတူလို.ပါ။ ခုပွဲ လုပ်နေတဲ. သူတွေ ကလည်း ရိုက်ချက် မပြင်းပဲ ဟန်ရေး တပြပြ၊ အေဘီ ပဲ နာတယ်။
January6at 6:16am · Like · 4
Skyheart Winko Do Gyi NB ဘာလုပ်နေကြလဲABကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆို
ထောက်လှမ်းရေးပါဆိုပြီးခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေချပြခိုင်းပါ......ဆိုတော့......ကဲ မပြောချင်လို့ကွာ....ကြာတယ် အဲဒီအချိန်တုန်းက အခု အဖြစ်မှန်ကိုဖော်မယ်ဆိုတဲ့ ကော်မတီတွေက AB မှာ ဘာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြတာဆိုတာ ဘယ်သူမှ ၂၅နှစ် အတွင်း မပြောကြသေးဘူးနော် အဲဒါကို အရင်ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေချပြခိုင်းပါ။
January6at 6:56am · Like · 3
Yebaw Aung DNA ကို ဗိုလ်အောင်မင်းတို့ cover လုပ်ထားတာမှန်တယ် ဆိုရင်တော့ DNA ရဲ့ ပြည်တွင်း network ကို ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားချင်လို့ ပါ။ စေတနာ မေတ္တာရှိလို့ တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်မိုးသီးကိုတော့ စစ်အုပ်စုက တခါတည်း ရှင်းထားချင်တယ်။ အရင်းစစ် လိုက်တော့ DNA ရော ဗိုလ်မိုးသီးပါ လူသတ်ကောင်တွေ အခွင့်အရေးသမားတွေဖြစ်ပြီး public image ဆိုးဆိုးရွားရွားကျသွားတယ်။ သူတို့ တွေ လူသတ်တာ မသတ်တာ လုပ်စားတာ မစားတာက ဒီအချိန်မှာ စာရင်းရှင်းဖို့ စောသေးတယ်။ Generation gap ဖြစ်ပြီး စစ်အုပ်စုလက်ထက်မှာ လူဖြစ်လာတဲ့ လူငယ်တွေကြားမှာတော့ DNA ရော ဗိုလ်မိုးသီးကိုရော လူမလေး ခွေးမခန့် ဖြစ်သွားတယ်။ အခုအချိန်မှာ အာဏာဟာ သန်းရွှေ ခင်ညွန့် တို့ အဆက် သိန်းစိန် နဲ့ စစ်အုပ်စု လက်ထဲမှာ ရှိသေးတဲ့အတွက် ဘယ်သူဘယ်ဝါကတော့ ထလရ စစ်စစ်တွေပါလို့ ဖော်ထုတ်လို့ မရမှာတော့ အသေအချာပဲ။ မြောက်ပိုင်းကိစ္စကို အချိန်မတန်သေးပဲ (ဒါပေမယ့် စစ်အုပ်စုအတွက်တော့ အချိန်ကိုက်) ပြီး ဖော်ထုတ်လိုက်တာဟာ မရိုးသားမှုတခုပဲ။
January6at 6:59am · Like · 1
January6at 7:13am · Like · 1
Aye Aye Soe Win ကိုနိုင်အောင်နဲ. ကို မိုး သီး လုံးလုံး မတူပါဘူး။ နိုင်. အောင်. အင်မေ.ဂ်ျ က မူကွဲပါတယ်။ နိုင်အောင်တို. က ခြစားတဲ.နေရာ မှာ ဆရာုကြီးတစ်ဆူ ၊၀ီခေါ်လို. လူတွေက ပို သတိထားပါတယ်။ မထားတဲ.သူတွေ က သူတို. နဲ. စားဖေါ်သောက်ဖက်တွေပါ။ ခု- အင်မေ. ဂ်ျ ကျနေပါပြီဆိုတဲ. နိုင်အောင်က သိပ် မဆုတ် ယုတ်ပါဘူး။ ကျောက်တူး လို. ငှက်ဖျားထိ၊ ဒူးပြဲ လာတဲ.သူငယ်ချင်းက၊ အချီကြီး ခြစားခဲ.ပြီး နှစ် ၂၀ စုထားစောင်းထား၊ပြီး အစိုးရနဲ. ဆက်ပေါင်း ဆက်လက် စီးပွား ဖြစ်နိုင်ငံရေး ဆက်လုပ်မဲ. သူ နဲ.တော. လုံးလုံး မတူနိုင်ပါဘူး။ မြောက်ပိုင်း ကိစ္စ ဟာ နိုင်အောင် တကယ် ထိ တဲ. ပွဲပါ။ လုံး မချကြပါနဲ.။
January6at 7:23am · Edited · Like · 2
Min Tharr ကျနော်နားမလည်တာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဌေးနိုင်သေတဲ့ ကိစ္စနဲ. ကိုမိုးသီးကို တရားစွဲနိုင်လိုက်တယ်။ အဲဒီကိစ္စရဲ. အချက်အလက် သက်သေအထေါက်အထားဟာ မြောက်ပိုင်း ၁၅ ယေါက် သတ်မှုနဲ. ကွာပါတယ်။ မြောက်ပိုင်း လူသတ်မှုဟာ ခိုင်လုံတယ်။ သတ်တဲ့သူကလဲ သူတို.သတ်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံထားတယ်။ တရားစွဲမယ်လို.ပြောပြီး ဟန်ရေးပြနေတဲ့သူတွေလဲ ပြနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထက်ထိ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကို တရားစွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းမကြား၇သေးဘူး။ ဌေးနိုင်မိသားစုတွေကပဲ တော်နေလို.လား။ မြောက်ပိုင်းပြန်တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကပဲ ချာနေလို.လား
January6at 7:37am · Like · 2
Aye Aye Soe Win ဌေးနိုင်မိသားစုတွေ က မတော်ပါဘူး။ အဓီက ကတော. ကို မိုးသီး က ၈၈၈၈ လှုပ်ရှာျး ကြီး မှာ ဆင်ဘောလစ် အရ အများကြီး ပို အရေးပါတယ်။ စစ်တပ် က ၈၈၈၈ အင်အားတွေကို ဖျက်ဆီး ချင် ရင် ဘယ်သူ. ကို ချကျွှေးရမလဲ ဆို တာသူတို.သိပြီးသား။ ခင် ညွန်. စီ သွားမေး စရာ မလို ဘူး။ သဘော ပေါက် ကြ။ နောက်တစ်ချက် က ၈၈၈၈ အုပ်စုကြီး က ကို ကို ကြီး ၏အဂတိ၊ ဘို ဘို ကို. ကြတော.၊ နိုင်အောင်. မထိစေချင်လို. ငွေ မျက်နှာနဲ.- မလုပ် ပါနဲ. ဆိုပြီး ကတိတွေတောင်း၊ အသေ၀င်ဖျက်တယ်။ ကို မိုးသီး ကို ကြတော.၊ သူ ကိုယ်တိုင်က အမဲ ဖျက် ချင်နေတယ်လေ။ လူ ဆိုတာ မျှတ ရတယ်။ တစ်ဦး နာစေ၊ တနောက် တစ်ဦး သာစေ လုပ် လို. မရဘူး။ သူ ဥရော ပ က ပြန်လာရော။ အို--ကို မိုးသီး အတွက် ထောင်ချောက်ကြီး က ပြူးပြဲ ထွက်လာတာပဲ။ မြောက်ပိုင်း အုပ်စု ကရော ဘာ ကြောင်. အဲ လို ကို နိုင် အောင်. ကို အမှု မဆင်ကြရသေးတာလဲ။ ဟန်ရေးပြတွေ များနေတယ်။
January6at 7:45am · Like · 4
Min Tharr U Mg Mg ဆိုတဲ့လူ ခင်ဗျား ကျနော်တို. အကြောင်းကို အရင်သိအောင် စုံစမ်းလိုက်ပါအုံး။
January6at 7:53am · Like · 3
Aye Aye Soe Win အမှန်တရား ကို တကယ် မဖေါ်ထုတ်ချင်တာ က စစ် အစိုး ရ နဲ. သူတို. လူတွေပါ။ ဒီ တော.--၈၈၈၈ အရေးတော် ပုံ နဲ. အဲ ဒီ. က ပေါက်ဖွားလာတဲ. အေဘီ ကျောင်းသား တပ်ဦး ကို သိက္ခာချဖို. သာ၊ လူတွေ ကို မိုက် ခွက် ကို င် အာ လူး ပေး ခွင်.ပေးထားတယ်။ စစ် အစိုး ရ ဘက် က ဘာကြောင်. ဒီ ကိစ္စက္စို -- အရေး ယူ ခွင်. မပေး သေးတာလဲ။ ဒီ ပဲ ရင်း ဂရက် ရိုက် မှာ စိုး လို. လား။ သတင်းပေး တွေ အမည် တွေပါ ကုန်မှာ စိုး လို. လား။ မြောက်ပိုင်းပြန်တွေက ဘာကြောင်.--ယု ဇန ရှေ. သွားပြီး နိုင်အောင်. ကို ဆန္ဒ မပြ သလဲ။ လုပ် ကြပါလား။ နိုင်အောင် ကျိုး သွား မှာ ပေါ.။ ခုတော.၊ ခုတော.--တာဝန် ရှိတဲ. သူက အင် တာ နေရှင် နယ် ဂျက် ဆက် တာ ဖြစ်နေတယ်။ အေဘီ က ထိုင် သိက္ခာကျပေးနေရတယ်။ မြတ် တာ ဘယ်သူတွေလည်း။
January6at 8:03am · Edited · Like · 3
အတာ လင်း ကဲကွယ်...AB လူသက်မူထားပါတော့၆၀..တရားဆွဲပြီး.အမှန်တိုင်းဖေါ်ထုပ်ပေးပါဘီတဲ့..ABကလူ၆၀ဆယ်သက်တာတရာရုံးတင်ရင်..စစ်အစိုးရလူသောင်းပေါင်းများစွာသက်တာကိုခုံရုံးတင်ဘို့ဦမောင်မောင်လုပ်ပေးနိင်မလားပြော..ပြည်တွင်မှာလာပြီးဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်ကျုပ်တို့ကဘယ်တုန်းကမှဘယ်NGOကမှပိတ်ဆံယူပြီးတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး..လာလုပ်ပေးနိင်တယ်..တရားဥပဒေ.ကောင်းပေါ်အောင်ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်လိုက်..စိမ်ခေါ်ရဲတယ်.လူထုကြားမှာတိုင်ပြည်ဖွံဖြိုးရေးတွေလုပ်နိင်တယ်.ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကနိင်ငံခေါင်ဆောင်ဘယ်တော့မှနေရာဝင်ယူမှာမဟုတ်ဘူး...စစ်အစိုးရဂွင်လုပ်သွားတာကျောင်းသားခံရတာ..ကျောင်းစာသင်ခန်းကထွက်လာတဲ့လူတွေက..လူမသေအောင်ဓါတ်ရိုက်တာဘယ်သူတတ်မှာလည်း..ရေကြည်အိုင်စစ်နည်း..သင်တန်းမတတ်ဘဲဘယ်လိုတတ်မှာလည်း.ထမင်းစားနေတဲ့လူတွေစဉ်စာကြပါအုန်းLOL..
January6at 8:07am · Like · 2
Min Tharr U Mg Mg ဆိုတာ လူသိမခံရဲလို. အခုမှ ကမန်းကတမ်း အသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အကေါင့်ပဲ။ လူသိမခံရဲထဲကိုက မရိုးသားလို. ဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်။
January6at 8:21am · Like · 2
Nyi Nyi Yu U Mg Mg...ခင်ဗျားကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးချင်တာတွေက အများကြီးပါပဲ...ခင်ဗျားသိအောင် ပြောပြချင်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်...ဒါပေမယ့် ချင်ဗျားက ဓါတ်ပုံလဲမပါ ဘယ်သူဘယ် ၀ါမှန်းလဲမသိရလို့အချိန်ကုန်ခံပြီး လိုက်မရေးပေးနိုင်တော့ဘူး ...ပြောချင်တာကတော့ စစ်အစိုးရအကြိုက်...AB ကို အပုပ်ချဖို့ တော့ မကြိုးစားပါနဲ့ ။
January6at 8:23am · Like · 4
Aye Aye Soe Win အေး ဟာ၊ ဟာ သကြီး။ ဟားဟား
January6at 8:23am · Like · 1
Aung Myint Han အထက်က မှတ်ချက်တွေဖတ်ရတာ စ်ိမကောင်းဘူး အကြောင်းက မပမှာ အစွပ်ဆွဲခံခဲ့ရကြီး အမှန်ပေါ်အောင် ကြိုးစားနေသူတွေကို ငါတို့ ရဲဘော်တွေကပဲ အပြစ်ပြန်မြင်နေကြတယ် သူတို့မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိမှာပါ ဒိုဝိုင်းကူကြရအောင် တစ်ကယ်ဆို မပကိစ္စကို ဖြေရှင်းဘို့ သက်သေခံတွေ ကိုမိုးသီးဆီမှာရှိတယ် ဒေါ်တာနိုင်အောင်
တို့ဗဟိုဘက်က တာဝန်ယူက့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေတွေပေါ့ ဒီသက်သေတွေကိုလည်း မပ အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ရေး အစွပ်ဆွဲခံ ဒို့ရဲေ်တွေကို ပေးဘို့ မန်းမှာတုံးက သဘောတူပြီးပြီ ခုလက်ရှိ AB အလံကိုင်ထားတဲ့ ကိုသံခဲတိုကလည်း ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ဖို့ သဘောတူပြီးပြီ မပကိစ္စကို အရင်းတည်ပြီး ငါတို့ ညီညွတ်
ကြရမယ် တစ်ခုပြောခြင်တာက မပကိစ္စ
ကြောင့်AB လူထုကြား ပုံရိပ်ကျတာတော့ဟုတ်တယ် ဒါကို မပရဲဘော်တွေလည်း သတိထားစေခြင်တယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ်သင့်သလောက်ပဲ လုပ်ပြီး အချက်အလက်စုစေခြင်ပါတယ် တစ်ချိန်
ပြီးတော့ မေးခြင်တာက ဒီကိုကိုကြီးတိုက ဒီကိုနိုင်င်ေကို ဘာလို့များ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာလဲ ဒီလိုဆို ငါတို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
ဒီလူ ဆယ်ပြားကျော်ကျော် လက်ထပ်ပွဲလည်း သွားခဲ့တယ် ပြည်တွင်းက တစ်ချို့ ၈၈ခေါင်းဆောင်တွေကျ အရေးမလုပ်ခြင်ဘူး
January6at 9:05am · Like · 3
Nyi Nyi Yu ကို အောင်မြင့်ဟန် ဆွေးနွေးပြတာကိုလက်ခံသလို...ခံခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေကို လည်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။...အခုဟာက ဘယ်လိုဖြစ်နေကြသလဲဆိုရင် စစ်အ စိုးရနဲ့ပနာစားတဲ့ခေါင်းဆောင်က အခွင့်အရေးရနေပြီး..စစ်အစိုးရနဲ့ပနာမစား တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေက အထိုးကျွေးခံနေရသလိုဖြစ်နေတယ်...သက်သေ တွေလည်းစုံလင်နေပြီပဲ...အဲဒါကို တရားမစွဲဆိုနိုင်သေးပဲ ဘာကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးပဲ လုပ်နေရတာလဲ...သူတို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခါလုပ်ရင် ကျနော်တို့AB က တခါသိက္ခာကျရတယ်လေ...ပြောချင်တာက စစ်အစိုးရရဲ့ဒီပဲယင်းကိစ္စကိုကျ တော့ ဘာဖြစ်လို့ မတောင်းဆိုကြပဲ...AB မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ကျမှ ဘာကြောင့်အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ဖြစ်နေကြရတာလဲ မဟုတ်ဘူးလား....မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ...ခံရတဲ့ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ အမြဲ တမ်းရပ်တည်ပေးသွားမှာပါ။....
January6at 9:30am · Like · 2
Aye Aye Soe Win ဟုတ်ပါ.။ ဒီ မြောက် ပိုင်း သတင်း ကို တွင် တွင် ထိုင်ရေး ပြီး အေဘီ သိက္ခာကျအောင် လုပ်နေတဲ. သတင်း ရေးစား သူတွေ က လည်း---ဘာကြောင်.--ဘာကြောင်.---မြန်မာ အစိုး ရ ဖက် က တရား စီ ရင် ရေး အပိုင်း ကို ဖွင်. မပေး ချင် ရ တာ လည်း လို.တောင် တချက် လေးတောင် မေးခွန်း မထုတ် ခဲ.ပါဘူး။
January6at 9:37am · Edited · Like · 2
Aye Aye Soe Win မြေနိမ်. ရာ လှံစိုက် ဆို ဘယ်သူ လုပ်လုပ် ဆန်.ကျင်တယ်။ အစိုး ရ နဲ. သူတို. ဘက်သား သတင်း သမားတွေ ၀င် အမြတ်ထုတ်တာ တော. ရပ် မကြည်.နိုင်ဘူး။ မနေ.တနေ. က မှ ထောင် က လွတ်လာတဲ. အေဘီ အဖွဲ. ၀င်ဟောင်းတွေ ပြည်တွင်း မှာ စား စရာတောင် မရှိပါဘူး။
January6at 9:40am · Like · 3
Aung Myint Han ကျွန်တော်တို့ မပလူသတ်မှု နဲ့ ဒီပဲယင်း
လူသတ်မှုတွေ တရားတဲ့တရားရုံး ရောက်အောင် ဒီထက်ကိုပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြဘို လိုမယ်ထင်ပါတယ်
January6at 9:42am · Like · 2
Aye Aye Soe Win ပထမ အချက် က စစ်အစိုး ရနဲ. ပလူးနေတဲ. အချောင်သမားတွေ ကို တချက်လေး မှ မျက် နှာ သာ ပေး လို. မရဘူး။ ခု ပဲ ရန် ကုန် ရောက် နေပြီ။
January6at 9:44am · Like · 1
Nyi Nyi Yu စစ်အစိုးရနဲ့ပလူး နေကြတာက အခုလက်ရှိ မြင်ကွင်းအရဆိုရင် အားလုံးနီးပါးလောက်ပဲနော်....ကြောက်စရာကြီး
January6at 10:02am · Like
Aye Aye Soe Win ကို မင်း ကို နိုင် တို. ဖိလစ် ပင်း ခရီး အတွက် ခင် ဥမ္မာ က တိုး ပက် ကေ.ဂ်ျ ယူထားပါတယ်။ ကိုကို ကြီး နဲ. နိုင်အောင် က လည်း စည်း ၀ါး ရိုက်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အေဘီ ဟောင်းတွေ က ကန်.ကွက် ရပါမယ်။ ပရော ဂျက် အကြီး ကြီး တစ်ခု သူတို. ပေါင်း တင် ကြမှာ ပါ။
January6at 10:06am · Like · 3
Nyi Nyi Yu ဘယ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်လိုယုံကြည်ပြီး အားကိုးရမှန်း ကိုမသိတော့ပါဘူး...စိတ်လဲမ၀င်စားချင်တော့ဘူး
January6at 10:14am · Like · 2
Smile Pyone ကိုကိုကြီးကို နိုင်အောင်က ဘူးသွင်းထားပြီးပြိ ကိုကိုကြီးခင်မျှာ ထောင်ထဲမှာ ငတ်ပြတ်လာတော့ ရုတ်တရက်ကြီး နိုင်အောင်က နတ်သမီးလေးငါးနဲ့ ပြုစုလိုက်တော့ ကိုကိုကြီးလည်းရူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့ နာ ဘာဖြစ်သွားပါလိမ့် ဆိုသလို ဖြစ်သွားလေရဲ့
January6at 10:21am · Like · 2
Tun Naing ဟေ့ smile, ပြောမဲ့လူဒီလူတွေဘဲရှိတော့လားဗျ အေဘီ ရဲဘော်တွေကုန်ပြီလား?...
January6at 10:35am · Edited · Like
Aung Gyi Gscအခုမှအကုံပေါ်လာတယ်သိတာလေးတွေရှိရင်လဲပြောကြပါအုံး
January6at 10:35am · Like
Nyi Nyi Yu လူတွေက ပထမတော့ ပြောရေးဆိုခွင့်တောင်းကြ တယ်...ပြီးလဲပြီးရော ဘာမှမပြောဆိုရဲကြတော့ဘူး.....
January6at 10:38am · Like · 1
Aye Aye Soe Win မကျေနပ်မှုတွေကို ထမ်းပိုးထား ရုံနဲ. မလုံလောက်တော.ပါ။ အလုပ်၊ အလုပ်၊ တဖက် ကလည်း--ထူးချွန် ထက်မြက်တဲ. ရဲ ဘော် ကောင်း၊ ရဲဘော် ဟောင်း၊ ရဲဘော်သစ်တွေ နဲ.၊တူရာ စုတတ်ရပါမယ်။ --အမှန်ကို ဆုံးဖြတ်တတ်သော ပရိသတ်နှင်. အတူ တကွပေါ.လေ။ မိမိတတ်နိုင်သော အလုပ်တွေမှာ အချင်းချင်း ၀ိုင်း ၀န်းပျိုးထောင်၊ စောင်.ရှောက်ကြပါ။ လူမှန် နေရာ မှန်တွေ ဆိုင် ရာဆိုင်ရာမှာ ဖြစ်ပြီဆိုရင်--- အမှန်တရား တွေ အားလုံး အစု အဝေးကြီး နဲ.ပေါ်လာပါလိမ်.မယ်။ အဲဒါကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ကြပါ။ လူအများစု ကမျှတခိုင်မာ ရင်၊ ---အားလုံး ဖြစ်လာမှာပါ။
January6at 11:02am · Like · 2
Tun Naing ဒီအချိန်မှာ မစည်းရုံးတော့ဘူး
နောက်တောင်ရောက်နေပြီ... ၀ိုင်းပြောကြပါ ဗျို့ ....။
January6at 11:13am · Like · 1
Nyi Nyi Yu ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မနဲကြီးစည်းရုံးထားရတာ အခုအချိန်က စည်းရုံးရေးဆင်းရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး....ပြောချင်တာကတော...လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ရှစ်ပူးခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူတွေကို ပြောရဲ ဆိုရဲရှိအောင် လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြတယ်...ပြည်သူတွေ က ပြောရဲဆို ရဲရှိလာတော့...ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေက ပြောရဲဆိုရဲမရှိကြ တောပြန်ဘူး....ဘာကြောင့်များပါ့လိမ့်
January6at 11:28am · Like · 3
Aye Aye Soe Win သူ တို. ကို မစောင်.ပဲ ကိုယ်. အချင်းချင်း လုပ်တတ် ကိုင် တတ် တဲ. စိတ်တွေ၊ ဦးဆောင် လုပ်လို. ရတာတွေ အများကြီး ရ၇ှိနေတာပဲ။ တဦးစီ လယ်ဘယ်လ် မှာ- လုပ်လို. ရတာတွေ မရှိဘူလား။ သူတို.ကိုစောင်. ရင်း ဘေးထိုင်ဘုပြောတွေ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို. က ဘယ်သူ. ခွင်.ပြုချက်မှ စောင်.တာ မဟုတ်ဘူး။ ကန်.ကွက် တတ် တာ၊ ဆန်. ကျင် ရဲတာ။ သူများကို မစောင်. ပဲ အလုပ်လုပ်တတ် တာ၊ အချင်းချင်းကြား လေ. ကျင်.ပေး လို. မရဘူးလား။ မြန်မြန် ဆန်ဆန် ထ လုပ် လိုက် ကြတာ က၊ စည်း ရုံးနေရတာ ထက် အများ ကြီး ပို လွယ်တယ်။ တော် လှန်ရေးမှာ အချောင် မစားဘူး။ အဖား မသန်ဘူး၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို ထူးထူးခြားခြား ခယ အကောင်း တမင် မြင် ပေး စရာလည်း မလို ဘူး။ သာ မန်လူတွေကို လည်း နှိမ် မဆက်ဆ့တတ်ဘူးဆို၊ လူလုပ်လို. ရနေပြီ။ အဖွဲ. အစည်းဆိုတာ၊ လူတွေ ပါ မှ ရွှေ.တာပါ။ ခု- ဖဘပေါ်မှာ လှုပ် ရှား တဲ. သူတွေ ကရော၊ အဖွဲ. တခုခု မန်း ဒိတ်နဲ. မလွတ် မလပ် လုပ်တာ ဆို လို.၊ ကြံ.ဖွံ. နဲ. စစ်တပ်ဘက်ကပဲ ရှိမယ်။ ကျန်တာ ကတော.၊ ဘယ်သူနဲ. မှ စည်းဝါး ကိုက် မထားတဲ. တကိုယ်တော် တွေ ချည်းပဲ မဟုတ်လား။ လုပ်လို. ၇တာတွေ မှ အများကြီး။
January6at 11:40am · Like · 4
Tun Naing သေချာတယ်... ဒါကြောင့် လည်းထိုင်မနေတော့တာ လူတွေကျန်သေးတယ် မစောင့်ပါဘူး ထွက်လာကြပါလိမ့်မယ်အဓိက ကတော့အမှန်တရားဘဲ.. သက်သက်မဲ့ personal attack မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ...
January6at 11:49am · Edited · Like · 4
Aye Aye Soe Win https://www.facebook.com/notes/ko-oo/%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%99%E1%80%B0%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%92%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8/477800018922949
By: Ko Oo
January6at 11:48am · Like · 2
Tun Naing အဲဒါ ဖတ်နေရင်း မန့် လိုက်တာ ကျေးဇူးပါ ကိုဦးရေးထားတာကောင်းတယ် ဖတ်မပြီးသေးဘူး
January6at 11:51am · Like
Aye Aye Soe Win အဲဒီ. နုတ် တ် မှာ သဘောတရားပါတယ် ရှင်.။ ကြိုက်တယ်။ နှစ် ၂၀ ကျော်တော် လှန်ရေးထဲက ဖေါက်ပြန်မှုတွေကို--အေဘီ ဘန်နာ အောက် က ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲ ထုတ် ရမဲ. အချိန်ပါ။
January6at 11:55am · Like · 3
Nyi Nyi Yu ဖတ်ပြီးသွားပြီး... ကောင်းလို့ ရှယ်ယာဝင်ထားလိုက်တယ်
January6at 12:00pm · Like
Aung Myint Han တစ်ချိုက မပကိစ္စကို ဒီအချိန် မပြောခြင်ကြဘူး ဒါပေမဲ့ ခုမြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာ တာဝန်အရှိဆုံး ဒေါ်တာနိုင်အောင်တို့ ခုလို ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ပေါင်းပြီး လှုပ်ရှားလာတာကို ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ မေးခြင်ပါတယ် စဉ်စားစရာနှစ်ခုက နိုင်ငံရေးကျင့်ဝတ်မရှိသူတွေ ဆတ်ပါလာတာကို ကြည်နြေကြမှာလား
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အဖွဲ့အနေနဲ့ရော ဘယ်သူဘာဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားသူတွေကို သစ္စာဖောက်တော့မှာလား ပရောဂျက်တင် ငွေရှာတာကို နိုင်အောင်တို့ မပါပဲ မလုပ်တက်တော့ဘူးလား ၈၈အပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ဘို့ စွန်လှတ်မှုများစွာနဲ့ ထွက်ခဲ့သူတွေကို ရက်စက်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းသူတွေကို
ငျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး
ကိုကိုကြီးကို တစ်ခုပြောခြင်ပါတယ် တောမခိုဘို သူကိုအတန်တန်တားခဲ့တယ် ခုသူပြန်လာတာ ငါတိုမကြိုနိုင်ဘူးလို့ ကိုမိုးသီးတုံးက သူပြောခဲ့တာ ဒေါက်တာနိုင်အောင်နဲ့ကျ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဒီလိုပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေတာ ၈၈အပြီး နည်းပေါင်းစုံနဲ့ တော်လှန်ရေးဆတ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ဗကသ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလေးစားလုပ်ရာကျပြီး ငွေခင်တယ်လိုဆိုစရာဖြစ်နေတယ်
January6at 5:49pm · Like · 5
Nyi Nyi Yu ကြာလာတော့လဲ ဘမျိုးဘိုးတူတွေဖြစ်သွားကြတဲ့သဘောပါပဲ...အချိန်တန်ရင် ပါတ်ဝန်းကျင်က သူတို့ ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသွားကြလိမ့်မယ်။
January6at 6:07pm · Like · 1
Aye Aye Soe Win ၈၈၈၈စီနီယာတို. သူတို.သဘောနဲ.သူတို. -- ကြောင် စုန်းများကို သာ လက်ခံသော သူတို. ရုံး၏ လိပ်စာ။ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ် ရှိပါသလား။ လုပ်လို.ရတာ ရှိပါတယ်။ ဒီ မို ကရက်တစ်နည်းကျကျပဲပေါ.။ ဖုံးခေါ် ကန်.ကွက် သင်.တယ်။ ကိုယ်တွေက မပြောရင်၊ ခေါင်းရှောင်နေကြဦးမယ်။ အမေရိက ကလူတွေ၊ ဒီ က လူတွေ လုပ်နည်း အတိုင်း တရားဝင် ကိုကို ကြီး ကိုမေးရအောင်၊ ဘာကြောင်.-- ခု ၈၈၈၈ စီနီ ယာ ရုံးက --၈၈အပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ဘို့ စွန်လွှတ်မှုမှုများစွာနဲ့ ထွက်ခဲ့သူတွေအပေါ် ရက်စက်ခဲ.သူများ ကို ရွှေးပြီး ဦးစားပေးသလဲ။ ဘာကြောင်.-- တော်လှန်ရေး ရ့ပုံငွေတွေနဲ. ခြစားအကျင်.ပျက် သူတွေကို အိမ်မလွေယ်ပေါက် ရုံးမလွယ်ပေါက်က လက်ခံပြီး ၂ ပေါက် တစ် ပေါက် ရိုက်ခွင်.ပေးရတာလဲ--- ဆိုတာ ၀ိုင်းမေးသင်.ပြီ။
January6at 6:26pm · Edited · Like · 2
Nyi Nyi Yu အဲဒီလို ဖုန်းဆက်တဲ့အခါကျရင် သူတို့ ကလည်း ဖုန်းကိုလက်ခံစကားပြော ပေးနိုင်ပါ့မလား....
January6at 6:29pm · Like · 1
Skyheart Winko ခင်ဗျားတို့မေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာ အသက်ခံရတဲ့သူတွေကို ထောက်လှန်းရေးဖြစ်ကြောင်း၊မဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အရာက တော်တော်ဆိုးဝါးလွန်းနေတယ် ABSDF အားလုံးစုက်ပြတ်သတ်သွားလိမ့်မယ်...ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်အဖွဲ့ရဲ့သမိုင်းတစ်ခုလုံးကို မထိခိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူဦးဏှောက်မရှိလို့ဘဲဖြစ်မယ်...
January6at 6:38pm · Edited · Like · 1
Aung Myint Han ကျွန်တော် မခုဆတ်မယ်
January6at 6:38pm · Like · 1
Aye Aye Soe Win စာ ၀ိုင်းရေးကြပါ။
January6at 6:39pm · Like · 2
Aye Aye Soe Win ကို ၀င်းကို--နင်တို. ကိုယ်တိုင် သူတို. ရုံးခန်းစာ သွားပေးခဲ.။ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ် မှတ်တမ်းတင်ထား။ ဘာကြောင်.--မသန်. ရှင်းတဲ.သူတွေ နဲ. တိုးတိုးတိပ်တိပ်ပေါင်းနေတယ် ဆိုတာ ရှင်းခိုင်း။
January6at 6:41pm · Like · 2
Aye Aye Soe Win မြောက်ပိုင်း ကိစ္စ ကို သုံး သုံး မသုံး သုံး၊ ဒီကိစ္စ မပါပဲနဲ. တောင်၊ နိုင်အောင်တို. နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက် နဲ. လုပ်ပု လုပ်နည်းတွေကို မေး ခွန်း ထုတ်ခွင်. ရှိပါတယ်။ ဒီမို ကရေစီ နည်းကျကျ ပေါ.။ ကိုကိုကြီး သူ က တစ်ဦးထဲ ထိုင် --အမိန်.ပေးနေရအောင်-ဘာလဲ။ ဗိုလိချုပ် ကိုကို ကြီးလား။
January6at 6:44pm · Like · 2
Aye Aye Soe Winhttps://www.facebook.com/88GenerationStudents
Page: 12,198 like this
January6at 7:04pm · Like
Aye Aye Soe Win အဲဒီ အကောင်. က အစစ်လား။ ဒါမှ မဟုတ် --၈၈၈၈ စီနီယာတွေ မဟုတ်တဲ.၊ တခြားတစ်ယောက်ယောက် က ပီအာလုပ်ပေးနေတာလား။ အဲဒီ. ကိုစာရေးပြီးသူတို.ဝေါလ်မှာတင်ရင် သူတို.ဖျက်ပစ်မှာလား။ သူတို. စီ ကို မက်ဆော.င်္ချ ပို.လို.ရလား။ ဖုံးဆက်ကြ။ တည်.တည်.မေးကြ။
January6at 7:06pm · Edited · Like · 1
Skyheart Winko ဟုက်ကဲ့ ရဲလင်းနဲနဲနောက်ကြမယ် တိုင်ပင်ပြီး လုပ်လိုက်ပါ့မယ်...
January6at 7:34pm · Like
Skyheart Winko လါမည့်မက်လမှာ ၈၈ ကဦးဆောင်ပြီး အလိမ်ခံရမည့်ABSDF & ပြည်ပလူ့ဘောင်သစ်ရယ် ၃ခုပေါင်းပြီး မြန်မာပြည် အထွေထွေ ညီလါခံကြီးလုပ်မည်တဲ့ ကျန်အဖွဲ့စည်းများ ကိုယ်ဟာကိုယ် အဆင်ပြေမဲ့ထိုအဖွဲ့တွေနှင့်ပေါင်းပါတဲ့ ကောင်းရော....တိုင်းပြည် ပြောင်းလဲဖို့ဘာလုပ်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။...
January6at 9:53pm · Edited · Like · 1
Johnny Lynnကျနော်ကကေအင်ယူကပါ။ကျောင်းသားကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားလို့အမြဲဖတ်အမြဲလေ့လာနေတာ၊ အခုဝင်းကိုကလာပြီးလူမိုက်သက်သက်လုပ်စော်ကားနေသလိုပဲ။ ဖတ်ရတဲ့ပရိသတ်ကို သူ့လောက်မသိဘူးထင်နေပုံရတယ်၊ အားလုံးကကြီးကအစအ အထိသိနေသူတွေအများကြီး၊ မနေ့တနေ့ကမှာ အိပ်မက်ကလန့်နိူးလာတဲ့သူကသိပ်ပြီးစွာနေတာကြည့်မကောင်းဘူး"
January6at 9:58pm · Like
Johnny Lynnအရှုပ်တော်ပုံအကြောင်းမသိဘဲဝင်ပြောရင်ပိုရှုပ်သွားတတ်တယ်၊ ၀င်းကိုကအခုတလောကမှာအိပ်ရာကနိူးလာတယ်ထင်တယ်၊ ကိုမိုးသီးရန်ကုန်ရောက်ပြီးမှာပေါ်လာတာလို့ထင်တယ်၊ သိပ်ပြီးဟော့နေတော့ကြည့်မကောင်းဘူး၊ မင်းထက်အများကြီးသိပြီး အတွင်းကျကျလူတွေပြောတာဆိုတာလေးကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦး"
January6at 9:59pm · Like
Johnny Lynn အားလုံးသတိထားကြ..၀င်းကိုအကောက်ဟာ မြန်မာပြည်ထဲက၀င်းကိုသုံးနေတာမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံခြားကတစ်ယောက်ယောက်သုံးနေတာဖြစ်မယ်၊ မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေ အင်တာနက်ကိုတစ်ချိန်လုံးဖွင့်ထားပြီးမသုံးနိုင်ဘူး၊နှေးလည်းနှေးတယ်၊ အခုဝင်ကိုအကောက်က နေ့တိုင်းလိုလိုမကြာခဏာတွေ့နေရတယ်၊ ကျနော်သတိထားမိတာပြောတာနော်၊ ဘယ်သူသုံးနေသလည်းဆိုတာခန့်မှန်းကြည့်လိုရတယ်
January6at 10:25pm · Like
January6at 10:31pm · Like
January6at 10:35pm · Like
Skyheart Winko Johnny Lynn ဓါးခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုတဲ့သူများကတော့ ဘာမှမသိပဲစွာကျယ်နေကြတယ်၊ သိနေတဲ့သူတွေပြောတာနားထောင်ရတာကောင်းပေမဲ့ ၀င်းကိုလိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ လူမိုက်လိုလိုကောင်တွေကြောင့်ပိုပြီးသိက္ခာကျစရာဖြစ်လာတော့မယ်
Johnny Lynn သတိထားနော် အခုမှတရေးနိူးလာပြီး အေဘီကိုချစ်ပြနေတဲ့သူတွေကို သတိထားကြနော် မပြောမရှိနဲ့..ကြည့်နေသူတို့ခြေလှမ်းတွေကရမ်းနေတယ်၊ အချင်းချင်းကိုပြန်ရန်တိုက်ပေးလိမ့်မယ်
January6at 10:36pm · Like
Skyheart Winko Johnny Lynn ကျနော်ကကေအင်ယူကပါ။ကျောင်းသားကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားလို့အမြဲဖတ်အမြဲလေ့လာနေတာ၊ အခုဝင်းကိုကလာပြီးလူမိုက်သက်သက်လုပ်စော်ကားနေသလိုပဲ။ ဖတ်ရတဲ့ပရိသတ်ကို သူ့လောက်မသိဘူးထင်နေပုံရတယ်၊ အားလုံးကကြီးကအစအ အထိသိနေသူတွေအများကြီး၊ မနေ့တနေ့ကမှာ အိပ်မက်ကလန့်နိူးလာတဲ့သူကသိပ်ပြီးစွာနေတာကြည့်မကောင်းဘူး
Skyheart Winko ကေအန်ယူကဆိုရင် မင်းတင်ထားတဲ့ပုံတွေက God's child တပ်ရဲ့ပုံတွေဘဲ နောက်ဆုံးမင်းတို့တပ်ပုံတွေတင်ပါ အခု နီထော်သော မင်းတို့ဘယ်မှာလုပ်နေလဲ....ဒါဆိုမင်းသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်တယ်...
Johnny Lynn မင်းသိတာဒါပဲလားဝင်းကို..ငါမဲဆောက်ကိုတစ်လ ၅ ခေါက်လောက်ရောက်တယ်၊ မင်းပုံကိုလည်းငါကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်၊ မင်းလာလည်ပါလားတစ်ခေါက်လောက်။ငါဧည့်ခံပါမယ်၊ ဟားဟား
Johnny Lynn လက်ရှိငါအခုကေအင်ယူဖြစ်နေပြီဝင်းကို အရင်တုန်းကငါအေဘီကလူတွေနဲ့အဓိကတွဲလုပ်ခဲ့တယ်၊ God အဖွဲ့နဲ့လည်းတွဲလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်၊ ငါတွဲမလုပ်တာမဲဆောက်မှာထိုင်ပြီးလေပန်းနေကြတဲ့ NGOs လိုလိုကောင်တွေပါ၊ ငါကလက်ရှိတော်လှန်ရေးထဲမှာ အခုစေ့စပ်ရေးလုပ်ထားလို့ငါအားနေတယ်၊ မင်းကရောဘာလုပ်နေလဲ
Skyheart Winko လါခဲ့ပါကွာ KNU ရော ABSDF ကောလဲငါ့ဘေးမှာရှိပါတယ် ကူညီနေတယ်...
January6at 10:38pm · Like
Chit Moe ABSDF မြောက်ပိုင်း အမှန်တရား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ...ခေါင်းစဉ်ကိုယ်ကြိုက်တယ်...သေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တဦးအနေနှင့်ပြောရရင်
ဒီလိုဘဲသွားကြတော့မလားမေးချင်တယ်၊ ABSDF မြောက်ပိုင်း အမှန်တရားလိုလားမိမိကိုယ်တိုင်းက
ပွင့်လင်းမြင်သားဘိုးလိုအပ်တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်အား သက်သေရှိလါးမေးရာ အသံဖိုင်ရှိကြောင်းဖြေပါသည် ဖွင့်ပြနိုင်မလါးဟုမေးသောအခါ တရားရုံးကြမှဖွင့်ပြမယ်တဲ့ နောက်သက်သေ ၃ယောက်ရှိပါတယ်ဖြေပါသည် ဘယ်သူတွေလဲဟု မေးသောအခါ သူတို့အသက်အန္တာရာယ်ရှိနိုင်ပါသည် ဒါကြောင့်လျိုဝှက်ထားပါသည်တဲ့။
ယခုလက်ရှိ ပြည်တွင်းရှိ ABSDF မြောက်ပိုင်းရဲဘော်၊သေဆုံးအထဲမှာအားလုံးအမှန်တကယ် ထောက်လှန်းရေး
မရှိ၊မပါဘူးလိုဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲ၊တယောက်ယောက်တော့တာဝန်ဘို့လိုအပ်တယ်။အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက် မြောက်ပိုင်း ထောက်လှန်းရေးတာဝန်ဘယ်သူ့ယူခဲ့သလဲ၊မေးမြန်းခွင့်ရအောင်ကြိုးစားသင်တယ်။
ယခုလက်ရှိ မနန်းအောင်ထွေးကြည်၊ မမေသင်္ကြန်ဟိန်း၊ စမ်းချောင်းဘိုဘို၊ NB ရဲလင်း
(၄) ABSDF မြောက်ပိုင်း အမှန်တရားပေါက်ရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်။
မနန်းအောင်ထွေးကြည်၊ မမေသင်္ကြန်ဟိန်း၊ စမ်းချောင်းဘိုဘို၊ NB ရဲလင်း၊???????
January7at 2:58am · Like · 2
Skyheart Winko များမကြာခင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လက်ညှိးထိုးတော့မှာမြင်လို့ အေးအေးနေ ၀ိုင်းလုပ်ပါ့မယ်ပြောလဲ မင်းတို့ဝေးဝေးနေကြဆိုပြီး မြောက်ပိုင်းကော်မတီဆိုပြီး ဟော့ရှော့တွေလုပ်နေကြတယ် အေး ဆက်လုပ်ကြည့်ပြီးမှ လက်ခုက်တီးပေးမယ် စမ်းချောင်းဘိုဘိုက ဘာတဲ့ လက်မဲကြီးတွေ တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာ မပါစေချင်ဘူးတဲ့ ကြိုက်တယ် ဒီစကားတာဝန်ယူထားနော်.....ပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက် ဦးခင်ညွန့် ထောက်လှန်းရေး စစ်ကြောရေးက စစ်တဲ့အတိုင်း မျက်ထောက်နီကြီးနဲ့ မမနန်း လက်ထောက်ပြီးဖြေနေတာ ကြောက်စရာကြီးနော်...
January7at 10:32am · Edited · Like
Skyheart Winko ငါတို့တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတိုင်း မတရားတာကို လူမိုက်လို့ပြောချင်ပြောပါစေ ၀င်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ စိက်ရှိကြပါတယ် တစ်ခုပြောချင်တယ် ၁။သေသွားတဲ့ရဲဘော်တွေက ထောက်လှန်းရေးမဟုက်ပါဘူးလို့ ဖြေခဲ့လျှင် ကျောင်းသားတပ်မတော် သမိုင်းဟာ အချင်းချင်း သတ်ရတယ်လို့ ရစရာနာမည် မရှိတော့ပါဘူး ၂။ ထောက်လှန်းရေး ဟုက်ပါတယ်လို့ ဖြေခဲ့လျှင် သေသွားတဲ့ရဲဘော် မိသားစုတွေက ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ အခုအချိန်မျိုးမှာ ငါတို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ဘေးကြပ်နံကြပ် စိက်ညှစ်တယ်ကွာ.....
January 8 at 9:26am · Like · 1
Hmone Shwe Yiနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်အစကတော.အေးအေးလေးနဲ.ပြောတတ်တော.သူကိုသနားသေးတယ်-မိုးသီးရန်ကုန်ရောက်သွားတော.မိုးသီးမျက်နာနားကပ်ပြီးဘာတွေပြောဆိုချိန်းချောက်မှန်းတော.မသိဘူးကိုထိန်းလင်းမျက်နှာကြီးကသရဲသဘက်ဆီးနေလားတောင်အောင်.မေ.ရတယ်တော်တော်ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးဒါတောင်မီဒီယာတွေရှေ.မှာနော်မမြင်ကွယ်ရာမှာဆို-သံချောင်းတို.မျိုးဝင်းတို.တောင်သူ.ကိုအရျုံးပေးရမလားဘဲ-မပကရဲဘော်တွေကိုအဲလိုမဝေဖန်ချင်ပါဘူးမြင်ရတာကအဆင်မပြေလို.သာပြောတာပါ
January 10 at 4:04pm · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 10:45 PM